WordPress.com? Waa tan sababta aan u isticmaali lahaa marka hore. | Martech Zone
WordPress.com? Waa tan sababta aan u isticmaali lahaa marka hore.
Arbacada, Maarso 13, 2013 Khamiis, Maarso 14, 2013 John Buluug
Waa maxay sababta WordPress.com?
WordPress waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn aaladaha wax lagu qoro la heli karo oo ku yimaada laba nooc, WordPress.com iyo WordPress.org.
Foomka koowaad, WordPress.com, waa adeeg ganacsi oo bixiya qalab wax lagu qoro oo bilaash ah oo lacag la'aan ah (adoo adeegsanaya WordPress dabcan) webka. WordPress.com waxay isticmaashaa software adeeg ahaan moodel (aka SaS), dayactirka aaladaha softiweerka ee barta wax lagu qoro iyo daryeelka waxyaabaha sida amniga iyo gaarsiinta waxyaabaha (bandwidth, storage, iwm).
Foomka labaad, WordPress.org, waa bulshada ka caawisa horumarinta iyo joogtaynta ilo furan nooca barnaamijka WordPress. Dhamaan qalabka wax lagu qoro WordPress waa la soo dejisan karaa laguna rakibi karaa kombiyuutar, server, ama bixiye bixiye aad dooratay. Dejinta ayaa ku jirta gacmahaaga adiguna waxaad mas'uul ka tahay bixinta amniga lagama maarmaanka ah iyo gaarsiinta waxyaabaha.
Maxaad midba midka kale uga door bidaa?
Aynu ku bilowno sababta WordPress.com marka hore. Xusuusnow, waxay bixiyaan barnaamijka softiweerka ah ee diyaar u ah inuu noqdo sidii blog ahaan. Dejinta aad masuulka ka tahay, haddii aad rabto, waxay naqshadeyneysaa muuqaalka bartaada. Waxyaabaha ay ka midka yihiin mawduucyada ama qaabeynta ayaa loo heli karaa inaad abaabusho. Waxaa jira defaults iyo WordPress.com waxay bixisaa talooyin. WordPress.com sidoo kale waxay bixisaa nooc cabbirkoodu wanaagsan yahay widgets iyo plugins, kuwaas oo ah aalado yar-yar oo wax lagu qoro oo ku daraya astaamo iyo shaqeynta bartaada. Tusaale ahaan, waxaad dooneysaa tusmo qoraallada hore ee blogka? Waxaa jira Diiwaanka widget. Marabtaa inaad soo bandhigto sawiradaada udambeeyay ee Flickr? Waxaa jira a Widget Flickr.
WordPress.com sidoo kale waa ganacsi ganacsi, oo bixiya waxyaabo dheeraad ah si ay uga caawiso kor u qaadista bartaada. Kuwani dheeraadka ahi waxay leeyihiin qiimo, in kasta oo aysan qaali ahayn, oo waxay kaa caawiyaan kobcinta bartaada internetka xitaa intaa ka sii badan. Tusaale ahaan, mawduucyada asaasiga ahi waa kuwo kufiican oo lagu bilaabi karo baloog garaynta. Laakiin haddii aad rabto qaar ka mid ah muuqaalada ama qaabeynta si aad ugu dhow ugu habboon qaabkaaga, markaa waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad iibsato a mawduuca ugu sarreeya.
Markaad bilowdo baloog ku yaal WordPress.com, nooca bilaashka ah, waxaad heli doontaa magac domain oo u eg sidan: your-blog-name.wordpress.com. Tusaale ahaan: beerbrownsays.wordpress.com. Si aad u yeelato magac domain ah non -wordpress.com, waxaad u baahan doontaa inaad cusboonaysiiso adeeggaaga si aad u isticmaasho a magac domain caadadiisu tahay.
WordPress.com waa, markale, ganacsi ganacsi sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay, waqti ka waqti, ku socodsiiyaan xayeysiis bogagga bilaashka ah. Waad iska ilaalin kartaa inaad xayeysiimahaas ku soo bandhigto bartaada adoo iibsanaya Qiimaha Xidhka. Qeybta Qiimaha ayaa sidoo kale bixisa boos dheeri ah (muhiim ah haddii aad leedahay sawirro badan), waxay kuu oggolaaneysaa inaad yeelato mawduuc caado ah, iyo magac domain caadadiisu tahay.
Waxaa jira xayiraad qaar ka mid ah isticmaalka WordPress.com oo aad u baahan karto inaad tixgeliso. Isticmaalka wixii qalab ah ee aad rabto suurta gal ma noqonayso haddii WordPress.com uusan horay u siinin rasmi ahaan adeegga. Tusaale ahaan, ma rabtaa inaad isticmaasho Calaamadaha SexyBookmarks plugin? WordPress.com ma laha SexyBookmarks oo qayb ka ah adeegyadooda aasaasiga ah. Marabtaa inaad isticmaasho NextGen qalabka maareynta warbaahinta? Tani sidoo kale qayb kama aha qaybta kumbuyuutarka ee WordPress.com.
Tan macnaheedu maahan in WordPress.com uusan laheyn xiriiriyeyaal wadaag ah (way sameeyaan, eeg Wadaagista) ama maaraynta warbaahinta (tan sidoo kale waxay leeyihiin, eeg Maktabadda warbaahinta). Sababta WordPress u xakameynayo isticmaalka plugins-ka ayaa ah maxaa yeelay plugins-ka ayaa ah softiweer ay tahay in la ilaaliyo waqti ka dib si loo hubiyo inuu shaqeynayo adeegga WordPress.com. Oggolaanshaha wixii qalab ah ee loo yaqaan 'plugin' waxay sababi kartaa in adeegga WordPress.com uu yaraado, inta hawsha lagu guda jiro, ay sababi karto arrimo ku saabsan balooggaaga.
Maxaad u isticmaashaa WordPress.com? Sababta ugu weyn ayaa ah kharashka, ama bilaash ama xirmooyinka lacagta ah, ayaa ka hooseeya inaad martigeliso iyo sii wad boggaaga WordPress.org. Ka fikir waxa WordPress.com ay bixineyso, qaabkooda bilaashka ah: barxad-qorista oo diyaar u ah inay ku sii socoto server-ka websaydhada ay maamusho oo ay ilaaliso Iyo xirmooyinka ugu sarreeya, kharashka laga helo $ 99 in $ 299 (UPDATE 2013 03 13: $ 99 illaa $ 299 sanadkii), waxay qaataan foosha, waqtiga, keydinta, iyo dadaal si loo hubiyo in bartaada internetka la heli karo isla markaana lagu wargaliyo dhagaystayaashaada. Markaa waxaad diiradda saari kartaa blogga, raadinta fikradahaas xiisaha leh oo aad dadka kale la wadaagto.
Ka waran WordPress.org, oo ah WordPress martigeliya Dhammaan fikradaha kor ku xusan ee ku jira WordPress.com, maxaad u dooneysaa inaad xitaa soo dejiso oo aad ku dejiso WordPress qaybtaada gaarka ah ee internetka?
Sababta ugu weyn ee dad badani sidan u sameeyaan waa xakameyn badan. Plugins iyo widget-yada aad dooratay waa la isticmaali karaa. Tusaale ahaan, haddii aad tahay sawir qaade doonaya inuu abuuro qolalka sawirrada ee shaqadaada markaa qalabka NextGen ee warbaahinta ayaa ah waxa aad u baahan tahay. Ama, haddii aad rabto inaad si weyn u qaabeeyaan muuqaalka mawduucyada aasaasiga ah sida Tababar or Genesis, markaa WordPress.org ayaa adiga loogu talagalay
Haddii aad rabto inaad socodsiiso xayeysiiskaaga, WordPress iskiis u martigeliya ayaa ah waxa aad u baahan tahay. WordPress.com uma ogolaanayo mid inuu maamulo xayeysiis xiriir la leh ama ololeyaal kale oo la mid ah (fiiri qoraalka advertising).
WordPress iskiis u martigeliya ayaa bixiya dabacsanaan badan markay tahay qaabeynta iyo qaabeynta. Si kastaba ha noqotee, dabacsanaantaas ayaa mas'uuliyadeeda leh. Adiga ayaa mas'uul ka ah martigelinta (tusaale ahaan adeegga sida BlueHost), dayactirka barnaamijka softiweerka ah ee loo baahan yahay (dhajinta farriinta hagaajinta), Iyo keydinta.
Kee la dooranayaa? Hadaad meherad tahay hadda bilaabanaya blogging markaa waxaan kugula talin lahaa WordPress.com oo waxaan diirada saarayaa sidii aad u horumarin laheyd bartaada. Sababta tani waa qiimaha waqtigaaga: ma rabtaa futz (waqti macaan oo waqti lumis ah) qiyaastii? Ujeeddadaadu waa inaad la xiriirto dhagaystayaasha, macaamiishaada, si joogto ah. Kharashaadka lagu bilaabayo, xitaa xirmada caymiska, way hooseysaa marka loo eego waqtigaaga.
Iyo haddii aadan ahayn ganacsi oo aad rabto inaad kuhesho qorista, qaabka bilaashka ah ee WordPress.com runti waa sahlan tahay in la bilaabo. Mar labaad, uma baahnid inaad futz, oo kuu oggolaaneysa inaad diirada saarto waxa ku jira iyo ku dhaqanka barta wax lagu qoro.
Lix bilood ka dib, ama sidaas, baloog garaynta (toddobaadle, sax?) Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad dib u booqato isticmaalkaaga WordPress.com. Ka fikir ganacsiga ama baloogyada baahiyaha muhiimka ah ee aan la daboolin. Iyada oo baahiyahaas aan la daboolin maskaxda lagu hayo waxaad go'aan ka gaari kartaa inaad u haajirto degel iskiis u martigeliyey iyo in kale. Iyo (halkan waa muuqaal aad ufiican) guuritaanka ka socda WordPress.com ilaa WordPress.org waa qurux toosan u sii wad. Waxay ubaahantahay qorsheyn iyo tijaabin laakiin howsha waa lawada ogyahay.
Tags: martigelisayWordPressmarti gelinta wordpresswordpress.com
Waa inaan gabi ahaanba, 100% kugu raacsaneyn midkaan, John! 🙂 Waxaad tilmaamtay in xakamaynta ay ahayd hoos u dhac ku yimid martigelinta WordPress.com - si fudud uma xakamayso aaladaha iyo mawduucyada iyo xayeysiinta. Waxay sidoo kale xakamaynaysaa hagaajinta iyo xajinta. Degel iskiis u martigeliya oo ku yaal WPEngine wuxuu leeyahay kaabayaal aad u xoog badan, maareynta domainka, kormeerka amniga, keydinta, aag diyaarin ah, konsol maarayn maareyn, shabakad gaarsiinta nuxurka, xaalad nidaamka farshaxanka farshaxanka, marin u helka liistada tusmooyinka, kontaroolada isticmaalaha… dhamaan wax kayar $ 99 bishiiba. Ha hoos udhigin rakibaaddaada WordPress adoo ku dhejinaya WordPress.com - runti waa waqti lumis.
Waa inaan ku raacsanahay Doug kan sidoo kale. Ugu dambeyntiina, malaha intaas in ka badan oo dhib ah in midba midka kale lala aado markay wax walba ku soo dhacaan, laakiin waxaad helaysaa xakameyn aad u badan markii aad marto waddada is-martigelinta ah. Hadda, haddii qof doonayo inuu sahaminayo WordPress oo "taayirada laado" si loola hadlo, ka dib dejiso degel shaqsiyeedka xalka .com haddii aadan runti rabin inaad lacag ku bixiso. Way ka fiican tahay Blogger, laakiin haddii aad xitaa waxyar ka dhab tahay waxa aad ka samaynayso khadka tooska ah. La tag xalka .com, iyo qof kasta oo u baahan xoogaa gargaar ah sidii wax loo dejin lahaa loona qaabeyn lahaa iyaga, kaliya ii soo sheeg.
Sidoo kale, WP Motor (aff link), hadda waxay leedahay $ 29 / mnth ikhtiyaari ah oo loogu talagalay hal goob. Adeeg weyn, taageero weyn.
Jun 25, 2013 saacadu markay ahayd 9:59 AM
tani waa maqaal weyn!
waad ku mahadsan tahay macluumaadka! wadaagi doonaa…